Ny famandrihana Newsletter amin'ny mombamomba ny Twitter dia fandresena azon'ny mpivarotra mailaka sy mpamandrika | Martech Zone
Tsy takona afenina fa manome ny tsipika fifandraisana mivantana amin'ny mpihaino azy ireo buletin-gazety, izay afaka mitondra fahatsiarovan-tena sy valiny mahavariana ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo na ny vokatra. Na izany aza, ny fananganana lisitra mailaka marina dia mety mitaky fotoana sy ezaka betsaka ho an'ny mpandefa sy ny mpandray.
Ho an'ireo mpandefa, tsara indrindra toy ny fahazoan-dàlan'ny mpiserasera hifandray, manamarina ireo adiresy mailaka amin'ny alàlan'ny fomba fiasa optika tokana na indroa ary mitazona hatrany ny lisitry ny mailakao Mety handany fotoana be daholo. Mila fotoana sy fitsapana ary lesoka ny paikady izay mety indrindra amin'ny fampitomboana ny lisitry ny mailakao.
Na izany aza, tsy mora amin'ny mpampiasa koa ny raharaha. Ny fisoratana anarana amin'ny lisitry ny mailaka nefa tsy mividy vokatra aloha na mamorona kaonty dia matetika midika hoe manelingelina ny zavatra ataon'izy ireo. Alao an-tsaina izany: manamarina ny telefaona na ny solosainao findainy ianao hahazoana ny vaovaonao rehefa mahita ny loharanom-baovao tianao indrindra dia misy amin'ny endrika mailaka isan'andro. Te-hampiditra ny fampahalalana mivantana amin'ny boaty fampidiranao ianao, noho izany dia kitiho ny rohy. Aorian'ny famindrana anao mankany amin'ny rohin'ny tranonkalam-baovao dia tsy maintsy jerenao hoe aiza no hisoratra anarana amin'ny mailaka. Moa ve ny famandrihana atolotra ao anaty boaty pop-up? Sa ao anaty boaty maro loko misy eo amin'ny faran'ny pejy? Aorian'ny fahafantarana an'ity toerana ity (sy ny fitantanana tsy hanelingelina ny lohateny hafa) dia ampidiro ny adiresy mailakao, hanamarina fa tsy robot ianao, ary kitiho ny fanekenao hisoratra anarana.
Soa ihany fa vetivety dia ho nanamora kokoa sy mora azo kokoa io fizotrany io ho an'ireo mpampiasa farany sy ireo tompon'andraikitra amin'ny famoronana lisitry ny mailaka.
Revue Avy amin'i Twitter
Tamin'ity fahavaratra ity dia nanomboka nandefa mpanamory fiaramanidina ho an'ny mpampiasa Android i Twitter. Ny orinasa dia nanisy fampiasa vaovao amin'ny mombamomba ny mpampiasa izay mamela ny mpampiasa hiditra mora kokoa famerenana, ilay sehatra fanaovana gazety Twitter azony tamin'ny Janoary. Ao amin'ity mpanamory fiaramanidina ity, rehefa manokatra ny piraofilina Twitter momba ny mpamorona na marika tiany indrindra ny mpampiasa, ny fisoratana anarana amin'ny taratasim-baovao Revue dia resaka vitsivitsy monja - a famandrihana kitiho, fanamarinana ny mailaka misy azy ireo (tsy mandeha amin'ny mailaka mifandray amin'ny kaonty Twitter) tsindrio ary an misafidy-in Ity dia manapaka ny dingana afovoany amin'ny fizotry ny fisoratana anarana amin'ny mailaka.
Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra amin'ity endri-javatra ity dia ny hoe tsy mila miala amin'ny sehatra media sosialy amin'ny alàlan'ny rohy izay mamily azy ireo ny mpampiasa. Raha mora ny manao azy, dia mazàna mandray anjara ny olona. Amin'ity lafiny ity, ny fanolorana famandrihana amin'ny mailakao ho mpivarotra sy ny fahitana ny atiny ilainao amin'ny maha-mpampiasa anao dia mety tsy ho tsotra kokoa.
Ny fampidirana newsletter Revue vaovao miaraka amin'ny Twitter dia ho fananana mahatalanjona ho an'ny marika na ny mpamorona atiny satria mamela ny mpankafy hanokatra lalam-pifandraisana iray hafa izay mety tsy noheverin'izy ireo tamin'ny voalohany raha tsy nisy io safidy io. Hanamora kokoa ny fampiasan'ny mpisera Twitter miaraka amina sehatra efa niorina ny mpankafy izay efa tena mifantoka tanteraka amin'ny atiny ao amin'ny lisitry ny mailaka.
Ny mpanamboatra gazety Revue dia mamela anao hanafatra ny sakafonao amin'ny tranokalanao ivelany mba hahafahanao misintona sy mandatsaka ireo lahatsoratra tianao hampidirina.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny marketing ara-tsosialy dia nahita ny mpampiasa Instagram fomba tsy manam-paharoa hahatonga ny kaontiny Instagram hiasa amin'ny marketing amin'ny mailaka. Na izany aza, ny Twitter izay manome rohy mivantana amin'ireo mpampiasa hisoratra anarana amin'ny mailaka dia mety hidika ho manamora kokoa ny famindran'ny mpamorona votoaty na vokatra avy amin'ny feed Twitter -n'izy ireo mankany amin'ny boaty fidirana mpikambana vaovao ao amin'ny fiarahamonina. Ity fampiasa ity dia tena sarobidy ho an'ireo marika sy mpamorona hanova ny media sosialy arahin'izy ireo ho mpanjifa, ary hatramin'izay fotoana izay dia manana ny fahafaha-manao tsy manam-petra izy ireo amin'ny fomba safidin'izy ireo hanangona ireo fifandraisana ireo amin'ny alàlan'ny mailaka.
Midira maimaimpoana maimaimpoana
Tags: mailaka Marketingmpanao gazety maimaimpoanaNewslettermpanao gazetyfamerenanafamandrihanaTwitterfamandrihana mailaka twitter
Kelsey dia matihanina amin'ny varotra eo amin'ny fiarahamonina miaraka amina sehatra esports sy teknolojia. Izy dia teo aloha nitana ny toeran'ny CEO ao amin'ny Gator Gaming ary nandray anjara lehibe tamin'ny fandaminana sy fampiroboroboana ny fifaninanana lalao maimaim-poana lehibe indrindra any atsimo atsinanan'i Etazonia. Izy izao dia Community Manager Manager ao Pathwire, mampiroborobo ny fitomboana amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy sy ny programa ambasadaoro Maverick.